Ungaseta njani izinto ezikhethwa nguMxholo kuTwitter? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Uyicwangcisa njani imixholo ekhethiweyo kwi-Twitter?
Meyi 11, 2021 0 IiCententarios 420
Ngenxa yeendlela ezisebenza ngazo i-Twitter, ukuhamba kolwazi olufikelela eqongeni kuyanda. Amakhulu amawaka eTweets ayenziwa ngalo naliphi na ixesha. Ngapha koko, kuqikelelwa ukuba i-500 yezigidi zeTweets zipapashwa mihla le kwihlabathi liphela ngamawaka ezihloko ezahlukeneyo.
Ke uya kutyhilwa kumthamo omkhulu wolwazi. I-Twitter iye yacinga malunga nokuba kungenzeka ukuba abasebenzisi bangabinangxaki yokuvezwa kakhulu komxholo ongahambelaniyo neminqweno yabo, ke le nkqubo ibeka iintengiso ezibabonisa zona, kwaye ngenxa yoko abaziva ngathi bagcwele ulwazi olungenakubenza banomdla.
Ngokunjalo, ngaphandle kwenkqubo efanayo emisela iimfuno kunye nezihloko zeprofayile yakho ngokwento oyenzayo eqongeni kunye nezinye izinto, ungayilungiselela ukuthanda kwakho kuqwalaselo lweprofayile yakho. Landela izikhokelo ezingezantsi ukuze ufunde indlela yokwenza.
Yintoni oyiphumezayo ngokwenza umxholo wakho ube wedwa?
Ngokumisela umxholo wakho unokwenza ubalo-maxesha inomdla ngakumbi kwaye iyakhawuleza kwaye ilula kwiiTweets, amakhonkco, iincoko, umxholo wemultimedia kunye nezihloko ezinokuba nomdla kuwe.
Kwangokunjalo, xa ubamisela, I-Twitter iya kukubonisa ezona Tweets zibalulekileyo, iintengiso ezingcono kunye neengcebiso ezifanelekileyo zokuba ungathanda ukulandela bani.
Useto lomxholo owubonayo
Ngena kwiakhawunti yakho ye-Twitter ngaso nasiphi na isixhobo, PC okanye iApp.
Fumana icandelo lokumisela kwimenyu esecaleni yebali lakho. Uyifumana ngokucinezela "ezinye iindlela" kunxibelelwano lwewebhu, ngelixa, kwiApp, uyifumana ngokufikelela kwifoto yakho yeprofayile.
Kweli candelo kufuneka ufumane "imfihlo kunye nokhuseleko". Nje ukuba ungene uza kuba nakho ukufumana "umxholo owubonayo". Xa ungena uza kubona lonke icandelo lenzelwe ukuthatha isigqibo malunga nokubonwa kwi-Twitter ngokwezihloko kunye nezinto onomdla kuzo.
Inketho yokuqala yile "Bonisa umxholo wemultimedia onokuba nezinto ezinokuthamba", oya kuthi uyisebenzise ngokusebenzisa ibhokisi.
Inketho yesibini iyahambelana "nesihloko". Oku kusebenza ukwenza iiTweets zakho zibe zezakho, kunye neziganeko kunye nezipapasho ozibonayo kumgca wexesha lakho. Kwi-interface uya kuba nakho ukubona imixholo ephakanyisiweyo, onokuyicima ngokulula. Ezantsi ungafaka "ezinye izihloko" ukongeza ezinye zazo.
Ngomdla ungafumana uluhlu lwazo, oluye lwachongwa yinkqubo ehambelana neprofayili yakho, ngokusekwe kwiiTweets ozipapashayo, umsebenzi wakho, kunye nezihloko zakho. Ndiyabulela kule mdla, i-Twitter inokumisela intengiso ekubonisa yona. Khetha okanye ucime ezo uzithandayo.
Ekukhangeleni useto, khetha ukhetho ukubonisa iziphumo ngokusekwe kwiiTweets kunye neendlela ezisekwe kwindawo okuyo.
Okokugqibela, "kuseto lokukhangela", isigqibo sokuba uyafihla umxholo onokuchaphazela ubuntununtunu babanye abantu. Unako kwakhona "ukususa ii-akhawunti ezivaliweyo nezithulisiweyo", nokuba aziveli kwiziphumo zokukhangela.
1 Yintoni oyiphumezayo ngokwenza umxholo wakho ube wedwa?
1.1 Useto lomxholo owubonayo
Instagram, Ungawatshintsha njani amazwi kwi-Instagram?
Ungaliguqula njani ixesha le-Twitter?